I-elektrakiti likagwayi SmokeIn - Messina
NgoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu: 08: 30-20: 00
NgoMgqibelo: 08:30-13:30 / 16:00-20:00
Ama-Cigarette we-elekhthronikhi "SmokeIn" - Messina
Isitolo esihle esibhekisisa ngokuthengiswa kwazo zonke izinhlobo zama-Cigarette e-Electronic kanye nokunambitheka
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-154)
Ugwayi kagesi onephunga elimnandi yimikhiqizo ebalulekile etholakala ku "SmokeIn", isitolo esihle ngaphakathi Messina ezikhethekile ngokuthengisa zonke izinhlobo ze E-usikilidi, kanye nezinsiza, I-Aroma, uketshezi nezinye izinto eziningi zabalandeli bomkhakha.
Ama-Cigarete e-elekthronikhi, ama-Flavour kanye nama-Liquid wabathandi be-vaping: "SmokeIn" ukwamukela kuMessina
Le Ugwayi kagesi ka "SmokeIn", kanye ne uketshezi ne-ai I-Aroma, bakha enye nenhle futhi ekhanyisiwe ye Messina yabo bonke abalandeli be ugwayi. Ukwenza, eqinisweni, njengababambele ukubhema kwendabuko, iyingozi kakhulu empilweni, Ugwayi kagesi banikeza ithuba kulabo abakulahlile ukuze bazi imizwa ephathelene nayo. Ngendlela enempilo futhi emnandi futhi emnandi. Lapho Ugwayi kagesi kungokoqobo Idivaysi kagesi futhi namuhla kungcono kuzo zonke izinhlobo ze tobaccos eyenziwe woza amasiga e ipayipi. Nikeza imiqondo yokuzwa kanye neyokuzenzela lokho kwenze umkhiqizo othandekayo. Ngokuqondile kule ndawo kukhona E-usikilidi imakethwe ngu "SmokeIn": ukunika bonke abalandeli balo mkhakha enye indlela evumelekile, engayingozi empilweni futhi ejabulisa iso nobukhazikhazi.
Ukufaka ama-Cigarette E-elekhtronikhi kuphela kusuka ku- "SmokeIn"
Le Ugwayi kagesi itholakala ku- "SmokeIn"Bathandeka hhayi ukubhema nje kuphela, kodwa futhi nokubonisa umdlalo. Eqinisweni, isitayela sabo esihle futhi esenziwe ngobuhle sibenze baba isesekeli sangempela semfashini kuzo zonke izindlela."SmokeIn"kufanelana, njengamanje, emakethe engenamkhawulo, enikela ngezindatshana ezingezizo kuphela izinto ezintsha, kodwa futhi ezangempela nezingavamile. Iningi lababhemayo bafundile ukubazisa ngoba kubasizile ukuba badumaze ukubhema kwendabuko.
Emhlabeni ka-E-ugwayi kusukela ngo-2013: I-SmokeIn iyisiqinisekiso sokwethenjwa
Kuyasebenza kusukela ngo-2013 emkhakheni we ukubhema ngogesi, "SmokeIn" wavela kusukela ekuqaleni izinhlobonhlobo zotshwala, amakha nezesekeli zabathandi I-SVAPO. Lapha uzothola izinhlobo eziningi zohlobo lwe-American, iMalaysian kanye neziphuzo ezaziwayo kubandakanya: I-VaporArt, Unkulunkulukazi, uCapella, I-tobacconist, Utsi, I-Eleaf, i-JustFog, i-Aspire, i-Lost Vape elahlekile nabanye abaningi. Ibhizinisi liyimakethe futhi I-hemp yezomthetho.
Kusuka ku- "SmokeIn" okunikezwayo okuningi nokuphakanyiswa okubonga ku-Fidelity Card
Abasebenzi abalungiselelwe, abatholakala ngaso sonke isikhathi futhi bakulungele ukuncoma izinto ezinhle kakhulu njengokuthanda, izidingo nezintandokazi zamakhasimende: konke lokhu nokunye okuningi uzokuthola e- "SmokeIn". Ngaphezu kwalokho, sibonga ukusetshenziswa kwe Ikhadi Lokuthembeka, wonke amakhasimende athembeke kakhulu azokwazi ukuqongelela amaphuzu futhi athole, lapho efinyelela imibundu ethile, izaphulelo ezithokozisayo ekuthengeni kwe Ugwayi kagesi, amakha, uketshezi nazo zonke ezinye izesekeli.
Ikheli: Nge-Piemonte, engu-14
Umakhala ekhukhwini: 348 8501698
Inombolo ye-VAT: 01522410834
Isitolo esinezimpahla ezinhle, abasebenzi abaqeqeshiwe nabanomusa, ngincoma kakhulu
Abasebenzi abanobungane kanye nezitolo ezigcwele kahle.